सोलुखुम्बु : कांग्रेस कार्य समितिमा को को निर्वाचित भए ? (सूचिसहित) - Solukhumbhu Samachar::No 1 News Portal from Solukhulmbu
सोलुखुम्बु : कांग्रेस कार्य समितिमा को को निर्वाचित भए ? (सूचिसहित)
सोलुखुम्बु । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिबेशन अन्तरगत जिल्ला नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना सकिएको छ । गत बिहीवार भएको मतदानको मतगणना शनिबार राती सकिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
जिल्ला कार्य समितिको सभापतिका लागि भएको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेनन् । कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी निर्वाचित भएपनि सभापतिका लागि भने विधान बमोजिम ५१ प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । जसका कारण पुनः मतदान हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस सोलुखुम्बुको सभापतिका लागि नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा, विनोद कुमार बस्नेत र राम बहादुर बस्नेतको उम्मेद्वारी परेको थियो । मत परिणाम अनुसार सभापतिका उम्मेदवार नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले ४ सय १८ र बिनोदबाबु बस्नेतले ४ सय २८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
अर्का उम्मेदवार रामबहादुर थापाले ५ मत प्राप्त गरेको बताइएको छ। निर्बाचनमा ८ सय ८२ मत खसेको थियो।
जिल्ला कार्यसमितिको उपसभापतिमा घनराज सुनुवार र फुदोर्जी शेर्पा, सचिवमा भलाकाजी कुलुङ र युबराज घिमिरे, सहसचिवमा ङिमाछिरि शेर्पा र उत्रमान राई विजयी हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
शनिबार सम्पन्न मतगणनाबाट सभापति बाहेक ३६ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति निर्वाचित भएका छन् । सभापतिमा सहमति नभएको खण्डमा आज नयाँ मतदानको मिति तोकिने जनाइएको छ ।
प्राप्त मत विवरण यस प्रकार छ :
सोलुखुम्बु कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधी को को चयन भए ? (सूचि सहित)
कांग्रेस महाधिवेशन मंसिर ९ गतेदेखि
ओलीको कदम प्रजातन्त्र बिरोधी, अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गरे सबैले भाग लिन्छन् – देउवा
सल्लेरीमा कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शन
सरकारविरुद्ध सल्लेरीमा कांग्रेसले प्रदर्शन गर्दै
कांग्रेसको २९ गते देशभर प्रदर्शन गर्ने
रिहा भए कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल
काँग्रेस नेता पौडेल पक्राउ
वडा कार्यालयमा कांग्रेसको तालाबन्दी
संगठित सदस्य संख्या १० हजार नाघेको माओवादी केन्द्र सोलुखुम्बुको दाबी
रोजगारीको लागि सूचना
प्रदेश १ – मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभामा पेस गरे विश्वासको मत